शिकार लागि वन hikes लागि skis शिकार
धेरै शताब्दीयौंदेखि, बाहिर सजिलो र तेज को आन्दोलन बनाउन जाडो मद्दत शिकार skis मा शिकार लागि वन hikes पूरा गर्न। हरेक वर्ष हिउँ को एक ठूलो रकम पतन जहाँ हाम्रो देश, मा, उपकरण को शिकार मा आवश्यक हुन्छ। तर, यो पर्याप्त बल, प्रकाश र व्यापक सजिलै हिउँ छोपेको ढलान चढ्नु हुनुपर्छ। तिनीहरूले सबैभन्दा ठूलो शक्ति स्किइङ, सन्टी र मेपल को शिकार छ। स्प्रूस उत्पादनहरू सन्दर्भमा, तिनीहरूले अघिल्लो analogues गर्न केहि कमसल हुनेछ।
शिकार skis छनौट, मुख्य सामाग्री रूपमा अभिनय, काठ गुणस्तर यसको ध्यान ध्यान दिनु पर्छ। पनि एउटा सानो स्पेक नकारात्मक भविष्य शिकार असर गर्न सक्छ। तिनीहरूले उपकरण संग एक व्यक्ति बोक्न हुनेछ रूपमा उत्पादन, व्यापक पर्याप्त हुनुपर्छ, तर लम्बाइ यति महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर छैन। यसबाट यो छोटो र विस्तृत skis धेरै सजिलो साँघुरो र लामो भन्दा जंगल मार्फत नेभिगेट गर्न भनेर निम्नानुसार। वैकल्पिक - प्लास्टिक उत्पादन, यसको आफ्नै विशिष्ट सुविधाहरू प्रत्येक तर तिनीहरूले केही बेफाइदा छन्। त्यसैले एक पटक विभिन्न सामाग्री को दुई जोडी सबै अवस्था लागि तयार गर्न मा छ सिफारिस गरिएको छ।
सबै शिकार skis संयुक्त kamusnye र golitsy सहित तीन मुख्य प्रकार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यी को पहिलो हिरन, घोडा वा एल्क को खुट्टा तल बाट लिएको छाला, को zhestkovolosoy भाग उत्तेजित। धेरै शिकारी सबै भन्दा राम्रो विकल्प घोडा Camus विमान स्लाइड छ भन्ने विश्वास गर्छन्। छाला एल्क बाँकी बल भन्दा बढी छ। यस्तो उत्पादनहरु को merits धेरै छन्, तर त्यहाँ बेफाइदा पनि छन्। उदाहरणका लागि, Camus छ skis किन व्यवस्थापन गर्न कठिन छन् गीला, विषय हो। Golitsy केहि भडकाने छैन, त्यसैले भनिन्छ। तिनीहरूले सार्नुहोस् सुधार गर्न मदत गर्ने विभिन्न साना nanodiamonds उपयोग गरदै को उपयोग शामिल छ। कहिलेकाहीं यी दुई प्रजाति प्रत्येक अन्य संग संयुक्त छन्।
कुनै पनि शिकार skis फास्टनरों साथै खुट्टा राख्नुभएको विशेष हुनुपर्छ, तर विशेष अवस्थामा सजिलै यो जारी गर्न अनुमति दिन्छ। तसर्थ, retaining संरचना सामान्यतया एक अपेक्षाकृत सरल उपकरण छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प बारे पाँच सेन्टिमिटर को एक चौडाई भएको साधारण छाला बेल्ट हुन सक्छ। जुडनार स्थापना एकदम महत्वपूर्ण क्षण हो। विशेषज्ञहरु आफूलाई अप जंगल मार्फत सार्दा जब खुट्टाको औंलासम्म बारेमा दस सेन्टिमिटर अगाडी retaining संरचना विस्थापित गर्न सल्लाह।
अक्सर, शुरुआती गल्ती स्किइङ वा पैदल यात्रा snowshoes पूरै जंगल मा शिकार analogues प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर वास्तवमा, यो सफल असम्भाव्य छ बनाउन। तिनीहरूले पर्वतारोहण र पर्यटन को लागि राम्रो, तर शिकार लागि छैन। खैर, ज्ञान, स्किइङ केही मात्रामा संग, शिकार एकदम सम्भव आफ्नै हात बनाउनु हो। यो समय र प्रयास को धेरै खर्च हुनेछ। मास्टर हात द्वारा उत्पादन धेरै मूल्यांकन गरिन्छ।
सामरिक झोला - छान्ने मा सल्लाह
Expander "पुतली" र यो ल्याउन सक्ने लाभ
यसलाई "Maynkraft" मा र फिलिमहरु मा एक प्रेत जस्तो देखिन्छ? को scariest लाश के हो?
को रेडियल सन्तुलन के हो? के जनावर रेडियल सन्तुलन छ?
दालचिनी मधुमेह। मधुमेह लागि दालचिनी: बनाउन कसरी
आफ्नो हातमा एक काठ बार कसरी निर्माण गर्न